विवादमा मिसेज श्रीलंका: विजेता बनेकी प्रतिस्पर्धीको ताज खोसियो त्यसपछि भयो हङगामा! - Malayakhabar
होम पेज फिचर विवादमा मिसेज श्रीलंका: विजेता बनेकी प्रतिस्पर्धीको ताज खोसियो त्यसपछि भयो हङगामा!
विवादमा मिसेज श्रीलंका: विजेता बनेकी प्रतिस्पर्धीको ताज खोसियो त्यसपछि भयो हङगामा!
एजेन्सी := आइतवार साँझ कोलम्बोमा भएको सौन्दर्य प्रतियोगिता विवादित बन्यो। ‘मिसेज श्रीलंका २०२०’ को उपाधि निर्णायकहरूले पुष्पिका डिसिल्भालाई दिने निर्णय गरे। उनको शिरमा ताज समेत पहराइयो। तर त्यसको केहि समयपछि उनको ताज जबरजस्ती खोसियो।
सन् २०१९ की विजेता क्यारलाइन जुरीले डिसिल्भाको ताज खोसेर फस्ट रनरअपलाई लगाइदिइन्। जुरीको आरोप थियो – पुष्पिका डिसिल्भाले सम्बन्धविच्छेद गरिसकिन्। त्यसैले डिसिल्भालाई उपाधि दिन नमिल्दै। त्यसैले मञ्चमै पुगेर जुरीले मञ्चमै डिसिल्भाको ताज खोसेकी थिइन्।
यो घटनापछि मिसेज श्रीलंका प्याजेन्टको आलोचना भइरहेको छ। सम्बन्ध बिच्छेद भएपनि ‘मिसेज श्रीलंका’ मा महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपाउनु गलत रहेको भन्दै विरोध भइरहेको हो। साथै यो घटना घटेको बेला डिसिल्भाको समर्थनमा आयोजक नआएकोले पनि आलोचना भएको हो।
यस् बारे थप तलको भिडियोमा हेर्नुहोस :
अघिल्लो लेख किम कार्दसियन बनिन् अर्बपति, घट्यो ट्रम्पको सम्पत्ति।
पछिल्लो लेख अफगानिस्तानमा एकैदिनमा ५९ जना मारिए।